Daraasad Cusub oo Ka Hadleysa Qiimaha Weyn ee Ag joogga Aabuhu Ugu Fadhiyo Ubadkiisa – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Daraasad Cusub oo Ka Hadleysa Qiimaha Weyn ee Ag joogga Aabuhu Ugu...
Daraasad Cusub oo Ka Hadleysa Qiimaha Weyn ee Ag joogga Aabuhu Ugu Fadhiyo Ubadkiisa
Daraasad ay diyaarisay Jaamacadda Newcastle ee dalka Ingiriiska ka soo baxda, ayaa daahrogtay in agjoogga aabaha uu caruurtiisa agjoogo ay kordhiso heerka garaadkooda iyo awoodahooda si aad u weyn marka loo barbardhigo caruurta kale ee ay hooyadu si gaar ah u korsato.
Jariidada Daily “Telegraph” ee dalka Ingiriiska ka soo baxda ayaa faafisay warbixin ka hadlay kororka garaadka, awoodaha iyo xirfadaha caruurta waqti badan la qaata aabayaashood, marka loo barbardhigo caruurta kale ee aan haysan daryeelka aabbe ee hooyadood ay si gaar ah u korsatay.
Daraasaddan ayaa caddeysay in caruurta waqti badan la qaata aabayaashood, oo ay kala qeybgalaan ciyaarahooda iyo firfircoonida kale ee ay sameeynayaan ay leeyihiin caafimaad caqli oo aad u wanaagsan, halka aragtida ilmahaa yar ay wanaagsanaato oo ay noqdaan ilmo aragti fog.
Laakiin, daraasadani waxey tilmaantay in joogitaanka aabaha aaney ku fulleyn inuu guriga joogo oo qura, laakiin loo baahan yahay inuu caruurta howlahooda kala qeybqaato, si uu khibradihiisa ula wadaago oo awoodahooda caqli ay u kobacdo.
Cilmibaarayaashu waxey dalbadeen in aabuhu uu kala qeybqaato caruurtiisa firfircoonida kala duwan ee ay qabtaan, sida inuu sheekooyinka u akhriyo, safarrada gaaban ee ay aadayaan uu la qorsheeyo, iyo waxyaabaha kale ee ay caruurtu jecel yihiin.
Daaniyal Niitil, oo hoggaamineysay khubarada cilmibaaristan sameeyay, ayaa tiri: “Lama filaankii aan daraasaddan ku aragnay waxa uu ahaa, farqiga weyn ee u dhaxeeya caruurta helay xanaanada aabaha, oo si weyn u heersarreeyey, xitaa markii ay 30-jir noqdeen oo ay gaareen heer ay ka dabaqad sarreeyaan oo ay ka hanti bateen asaagoodii aan helin xanaanada aabahood.”
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayaa waxey tiri: “Tirakoobyadii aan sameynnay waxey tilmaameyaan in qof qaangaar ah uu soo gardaadiyo caruurta yaraantooda ay faa’iidooyin waaweyn u leedahay, xirfadda, awoodaha oo joogto u noqonayaa xitaa marka ay weynaadaan.”
source Goobjoog Edu
Previous articleDaawo: Sacuudiga oo joojiyey Xoolo laga helay Xanuuno iyo laba markab oo lasoo Celiyey
Next articleDacwaddii Badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo mar kale dib loo dhigay